4 Dariiqo oo Cajiib ah oo aad ku Muujin karto oo aad Lacag uga samayn karto Sawirkaaga WordPress | BehMaster
Bogga ugu weyn/WordPress/4 Siyaabood oo Cajiib ah oo lagu soo bandhigo oo lagaga faa'iidaysto Gallery Sawirkaaga WordPress
4 Siyaabood oo Cajiib ah oo lagu soo bandhigo oo lagaga faa'iidaysto Gallery Sawirkaaga WordPress
Markaad ku iibinayso sawirada iyo farshaxanka boggaaga WordPress ama baloogga, naqshadaynta sawirka ugu fiican ayaa muhiim ah. Doorashada mawduuca WordPress ee quruxda badan, hagaajinta nuxurka weyn, iyo abuurista alaabada la jecel yahay waa kala bar dagaalka.
Haddii gallery-ka sawirkaagu aan loo hagaajin in la iibiyo, wali waxaad ku dhibtoon doontaa inaad lacag samayso.
Dhanka kale, haddii aad dhisi karto meelo muuqaal ahaan soo jiidasho leh, si fiican loo habeeyey, oo ay ku jiraan dhammaan sifooyinka aad u baahan tahay, waxaad aad ugu dhowdahay inaad dhaqaale ahaan guulaysato. Nasiib wanaag, adoo isticmaalaya xaqa WordPress gallery plugin wax badan ayey kuu fududayn kartaa in aad lacag ka samayso hal-abuurkaaga.
Maqaalkan, waxaan kaga hadli doonaa sababta sawirada sawiradaadu ay fure u yihiin guusha dukaankaaga onlaynka ah. Kadib waxaan sahamin doonaa sida loo ilaaliyo oo loo hagaajiyo sawiradaada, ka hor inta aanan daboolin qaar ka mid ah siyaabaha ugu fiican ee lagu soo bandhigo oo loogaga ganacsado sawirka ama gallery. Aan bilowno!
Cusbooneysiintayada tooska ah iyo difaacyada adag ee amniga ayaa ka saaraya maamulka server-ka gacmahaaga si aad diiradda u saarto abuuritaanka degel weyn.
Waa maxay sababta Sawirka Waxtarka leh uu fure u yahay Dukaanka Tooska ah ee Najaxa
Muujinta shaqadaada horteeda iyo xaruntaadu waa muhiim marka sawirada internetka lagu iibinayo.
Iibinta farshaxanka iyo sawir qaadista internetka isla mar ahaantaana weligood may fududayn oo haddana ka adag sida ay hadda tahay. The badinta adeegyada ganacsiga e-commerce waxay u fududaynaysaa qof kasta inuu abuuro dukaan online ah oo uu iibiyo shaqooyinkooda hal-abuurka ah. Si kastaba ha ahaatee, tani waxay abuurtay suuq buuxa, si kastaba ha ahaatee, halkaas oo ay sii kordheyso ay adag tahay in laga sooco dadka.
Sababtan awgeed, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in dukaankaagu yahay mid soo jiidanaya oo si buuxda u muuqda. Dabcan, waad rabi doontaa isticmaal mawduuca WordPress taasi waa soo jiidasho leh iyo in tallaabo la isbeddellada naqshadeynta shabakadda ee ugu dambeeyay. Laakiin marka ay timaaddo iibinta farshaxanka iyo sawir qaadista, isticmaalka sawirka sawirka ayaa had iyo jeer ah xalka ugu waxtarka badan. Habayntani waxa ay awood kuu siinaysa in aad diirada saarto alaabtaada oo aad ku tusto iftiinka ugu fiican ee suurtogalka ah. Waxa kale oo ay ka dhigtaa habka wax iibsiga iyo wax iibsiga mid sahlan oo lagu raaxaysto macaamiishaada.
Nasiib wanaag, waxaad si fudud ugu dari kartaa sifooyinka ganacsiga e-commerce gallery sawirkaaga rakibidda plugin WordPress ah sida NextGEN Gallery. Qalabkani wuxuu kaa caawinayaa inaad soo bandhigto oo aad u iibiso shaqadaada si aan dadaal lahayn, iyo kuu suurtageli kartaa ku wanaaji gallery kaaga kordhinta taasi waxay ku dari kartaa xitaa shaqeyn dheeraad ah.
Waxaan ka wada hadli doonaa sida aad uga faa'iidaysan karto bandhigga sawirkaaga dambe ee maqaalkan. Marka hore, aan eegno qaar ka mid ah waxyaabaha ay tahay inaad sameyso si aad ugu diyaariso goobta sawirkaaga guusha.
Relacionado: Sida Loo Doorto Mawduuca WordPress ee Saxda ah ee Mareegahaaga
Sida loo diyaariyo oo loo wanaajiyo goobta sawirkaaga (3 Talooyin muhiim ah)
Kahor intaadan u furin dukaanka khadka tooska ah ee dadweynaha, waxaad u baahan tahay inaad hubiso in sawiradaada iyo gallery ay diyaar u yihiin inay tagaan. Si aan kaaga caawino, waxaanu eegi doonaa dhawr siyaabood oo aad ku diyaarin karto gallery kaaga oo aad hubiso in uu sugan yahay oo loo hagaajiyay khibrada isticmaale ee ugu fiican ee suurtogalka ah.
1. Sawiradaada ka ilaali tuuganimada
Waxa ugu horreeya ee aad u baahan tahay inaad ka fiirsato waa sida looga fogaado xatooyo sawir. Tani waa dhibaato caam ah oo haysata fanaaniin badan oo khadka ah waxayna ku lug leedahay sawirada laga badbaadiyay goobtaada oo dib loo daabacay ama la isticmaalay iyadoon si sax ah loo nisbayn. Tani waxay si gaar ah dhib u leedahay haddii website-kaagu ka kooban yahay sawirro heer sare ah, maadaama isticmaalayaashu si fudud u koobi karaan ama u daabacan karaan halkii ay lacag ku bixin lahaayeen asalka.
Nasiib wanaag, waxaa jira siyaabo aad uga gudbi karto dhibaatadan. Mid ka mid ah kuwa ugu guud oo waxtar leh farsamooyinka waa ku darida astaan-badeed-daah-furnaan, taas oo qayb ahaan ku qarinaysa sawirka calaamad ama qoraal. Tani waxay ka dhigaysaa sawiradaada ku dhawaad ​​wax aan macquul ahayn in la xado. Intaa waxaa dheer, habkani si gaar ah ayuu waxtar u leeyahay haddii aad ku dartay macluumaadkaaga calaamadda biyaha, sida magacaaga ama URL-ka degelkaaga.
Waxa kale oo aad ku xakamayn kartaa xatooyada sawirka adiga oo isticmaalaya curyaaminta guji-midig sawiradaada. Tani waxay ka dhigi doontaa mid aad u adag isticmaalayaasha si ay u badbaadiyaan sawiradaada ama u galaan URL-yada si ay u isticmaalaan sawirada iyada oo aan loo eegin. Kani maahan nidaam fiican, maadaama aanay ka joojinayn isticmaaleyaasha inay sawir-qaadaan, laakiin waxay gacan ka geysan doontaa joojinta tuugada dulqaadka la'. Marka lagu daro watermarks, waxaad yeelan doontaa nidaam wax ku ool ah oo aad ku ilaaliso shaqadaada.
2. Samee Backups of Your Images
Waxay u badan tahay inaad horeba uga warqabtay muhiimada ay leedahay abuurista kaydka. Tani kaliya maaha run for your website WordPress guud ahaan laakiin sidoo kale sawiradaada. Waa inaad had iyo jeer hubisaa inaad haysatid nuqullo asal ah oo aan la tafatirin oo sawir kasta oo aad soo geliyaan meel badbaado leh. Intaa waxa dheer, waxa kale oo aad muhiim u ah in loo isticmaalo kaydinta sawirkaaga ama goobta sawirka.
Tusaale ahaan, aynu nidhaahno waxaad ku dartay calaamada-biyoodka dhammaan sawiradaada, ama aad wax ka bedeshay. Kaydinta dhammaan sawirada waxay awood kuu siinaysaa inaad si degdeg ah ugu laabato asalka, si aadan waligaa waxba u lumin. NextGEN Gallery ka kooban yahay ikhtiyaarka ah in si toos ah ugu celi sawiradaada oo dhan, kaas oo si caadi ah loo hawlgeliyay. Hubi in goobtan ay shidantahay, mana ka werweri doontid luminta sawirada ama aad ku dhegganaato tafatir aan laga noqon karin.
3. Hagaaji sawiradaada si aad u dardar geliso goobtaada
Hagaajinta sawirka macneheedu waa in la cadaadiyo cabbirka faylka sawiradaada iyada oo aan si muuqata u saamaynayn tayada guud. Tani waa wax waan ku talinaynaa dhammaan milkiilayaasha bogga WordPress waxay sameeyaan dedejiya bogaggooda qalabka oo dhan. Si kastaba ha ahaatee, waxaa si gaar ah muhiim u ah haddii website-kaagu ka kooban yahay sawirro badan oo qaraar (tusaale ahaan, haddii aad iibinayso sawir).
Inta badan ee sawirada goobtaadu ka kooban tahay, waa ay sii yaraanaysaa waxa ay caadi ahaan soo shubanayso. Tani waxay keeni kartaa in dadku ay ka lumaan dulqaadka oo ay ka tagaan, taas oo keenta heer sare heerka cigta oo balaayo ayuu ku yahay guntaada. Dhab ahaantii, ilbiriqsi kasta oo dheeri ah waxay ku qaadanaysaa in lagu shubo mareegahaaga ayaa u tarjumaysa 7% hoos u dhac ku yimid beddelka. Marka la soo koobo, taasi waxay la macno tahay inaad ku iibin doonto sawirro yar oo ku yaal goob gaabis ah.
Dabcan, waxaad weli rabi doontaa inaad isticmaasho sawirro tayo sare leh, markaa waxaad u baahan tahay inaad hesho dheelitirka saxda ah ee u dhexeeya tayada iyo cabbirka faylka. Waxaa jira qalab badan oo la heli karo oo aad isticmaali karto si aad u wanaajiso sawirada adigoo ilaalinaya ku dhawaad ​​aan la kala saari karin faylalka asalka ah. Kuwaas waxaa ka mid ah Imisaow, kaas oo si buuxda ula jaan qaadaya NextGEN Gallery. Imagify wuxuu si toos ah u wanaajin doonaa dhammaan sawirada aad soo gelisay goobtaada, iyo sidoo kale gallery-kaaga jira. Tani waxay kaa qaadaysaa hal hawl oo kale oo muhiim ah gacmahaaga.
Relacionado: 12 Sababood oo uu Mareegtaada Gaabis u Yahay (iyo Sida loo Hagaajiyo)
Ilaa hadda, waxaan ka wada hadlaynay sidii loo ilaalin lahaa sawiradaada oo aan u tayayn lahayn si wax ku ool ah. Marka hawlaha kor ku xusan la maamulo oo sawirkaaga sawirku diyaar yahay, waa markii aad bilaabi lahayd lacag ka samaynteeda! Halkan waxaa ah afar siyaabood oo aad taas ku samayn karto adigoo isticmaalaya NextGEN Gallery plugin.
1. Ku dar Astaamaha Ganacsiga E-commerce Gallery Sawirkaaga
Si aad uga shaqeysiiso gallery sawirkaaga, waa inaad marka hore hirgalisaa xalka ganacsiga e-commerce. NextGEN Gallery ayaa tan ku fududeynaya Pro Ecommerce, kaas oo kuu ogolaanaya inaad si toos ah uga iibiso alaabta gallery kaaga.
Goorta tani dhacdo kordhin ayaa lagu daray boggaaga WordPress, waxaad awood u yeelan doontaa inaad wax ku iibsato gallery kaaga. Tani waxay keeni doontaa in astaanta gaadhiga wax iibsiga uu ka soo muuqdo sawiradaada agtooda. Waxaa dheer, marka aad aragto qaabka cabbirka buuxa ee sawirka, xulashooyinka qiimuhu waxay soo bandhigi doonaan garabkiisa.
Siciradan waxaa lagu dejiyaa abuurista liisaska qiimaha. Waad habeyn kartaa inta sawir kastaa ku kacayo oo go'aamin kartaa qiimaha dhoofintaada iyo cashuurahaaga. Liisaska qiimaha waxaa lagu dabaqi karaa dhammaan gallery ama waxaa lagu qeexi karaa shay gaar ah. NextGEN Gallery wuxuu awood kuu siinayaa inaad abuurto tiro aan xadidnayn oo liisaska qiimaha ah, si aad si buuxda u maamusho kharashka shaqadaada.
Si aad u bilowdo, waxaad marka hore u baahan doontaa inaad abuurto sawir sawireed iyo soo geli sawiradaada (haddii aanad hore u haysan). Waxaad markaa u habayn kartaa gallery sidaad rabto. NextGEN Gallery waxa uu bixiyaa fursado badan oo ah sida loo soo bandhigo sawiradaada, marka waxa mudan in aad barato naftaada goobaha la heli karo.
Marka gallery-kaagu diyaar yahay, waxaad u baahan doontaa inaad samayso liis qiimo la habeeyey. Waxaad markaa u qoondayn kartaa liiska qiimahaas gallery, oo waxaad awood u siin kartaa e-ganacsiga dusheeda. Sida caadiga ah, tani waxay khusayn doontaa qiimayaasha la cayimay dhammaan alaabta. Si kastaba ha ahaatee, waxaad u cayimi kartaa liis qiimo kala duwan sawir kasta oo ku yaal gallery.
Habkani waxa uu awood kuu siin doonaa in aad ka iibiso sawirada gallery-kaaga. Dabcan, tani waa uun caarada barafka marka ay timaado waxaad samayn karto. Waxaan kugula talineynaa inaad waqti la qaadato Dukumentiga rasmiga ah ee NextGEN Gallery, si aad si fiican u fahamto sida loo hagaajiyo goobaha ganacsigaaga e-commerce.
Relacionado: Wax kasta oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato WordPress: Koorso shil 5-daqiiqo ah
2. U samee shatiyo Alaabtaada Dijital ah
Iibinta nuqullada dhijitaalka ah ee shaqooyinkaaga waa hab caqli badan oo aad lacag ku kasbato adigoon soo saarin oo soo rarin alaabta jirka ah. Markaad isticmaasho NextGEN Gallery si aad u iibiso alaabta dhijitaalka ah, macaamiishaada waxaa loo wareejin doonaa bog ay ku soo dejisan karaan faylka ka dib markay dhammeeyaan iibkooda.
Alaabooyinka dhijitaalka ah ayaa lagu daraa iyadoo la adeegsanayo hab la mid ah alaabada kale, laakiin waxay u baahan yihiin qaabayn dheeri ah. Magac ahaan, waxaad u baahan doontaa inaad abuurto a heshiiska laysanka, kaas oo go'aaminaya waxa macaamilku awoodo iyo waxa aanu ku samayn karin sawiradaada.
Tani waa muhiim sababtoo ah heshiiskani waa meesha aad ku qeexi doonto sida saxda ah ee macaamiisha loogu oggol yahay inay isticmaalaan shaqadaada. Waxaad u isticmaali kartaa shatiyo kala duwan badeecooyin kala duwan, ama waxaad u isticmaali kartaa shatiyada heerarka qiimaha. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inaad rabto inaad bixiso qiimo jaban shatiga kaas oo kaliya u shaqeeya isticmaalka aan ganacsiga ahayn. Waxaad markaas bixin kartaa nooc ka qaalisan isla badeecada, oo wadata shati u suurtagelinaysa macaamilka inuu u isticmaalo sawirka si ganacsi ahaan.
Had iyo jeer way fiican tahay in loo gudbiyo xirfadle sharci marka la diyaarinayo heshiiska shatiga. Haddii aadan haysan doorashadaas, si kastaba ha ahaatee, waxaad fikradaada ka qaadan kartaa heshiisyada rasmiga ah waxaa bixiyay Imagify.
3. Bixi doorashooyin badan oo lacag bixin ah
Haddii aad rabto inaad ku guulaysato ganacsigaaga e-commerce, waxaad u baahan tahay inaad ka dhigto habka wax iibsiga sida ugu fudud ee suurtogalka ah. Hal dariiqo oo aad tan ku sameyn karto waa inaad wax bixiso siyaabo badan oo lacag-bixineed. Ma rabtid inaad lumiso iib sababtoo ah isticmaaluhu wuxuu u arkaa habka hubinta mid jahawareer leh ama waqti badan qaadanaya maadaama aad ku qasabtay inay isticmaalaan nooc lacag bixin ah oo aanay aqoon u lahayn.
Adigoo awood u siinaya hababka lacag bixinta ee ugu caansan, sida PayPal, karbaash, jeegaga, iyo kaararka deynta, waxaad samayn doontaa dhamaystirka iibka si aad u fudud. Adigoo isticmaalaya NextGEN Gallery, waxaad si fudud u hirgelin kartaa dhammaan hababkan lacag-bixinta oo ay weheliso sawirkaaga sawirka. Waxa kaliya ee aad u baahan tahay inaad samayso waa inaad iska diiwaan geliso adeegyada aad rabto inaad fuliso, ka dibna ku habayso goobtaada macluumaadka lacag bixinta.
Plugin-kan WordPress wuxuu sidoo kale awood kuu siinayaa inaad samee codes coupon in aad habayn karto, si aad u bixiso heshiisyo gaar ah wakhti xaddidan ama si aad u beegsato dhagaystayaal gaar ah. Waxaad si buuxda gacanta ugu haysaa wax kasta oo kuuban gaar ah, oo ay ku jiraan inta ay ansax tahay, badeecadaha ay ku jiraan, iyo sida ay u saamayn doonto qiimaha ugu dambeeya.
4. Abuur Gallery caddayn ah
Ugu dambeyntii, haddii aad abuurto shaqooyin loo xilsaaray, waxay u badan tahay inaad taqaan fikradda a gallery. Kani waa gallery had iyo jeer ah mid gaar ah oo loogu talagalay macmiil gaar ah. Macaamiilku wuxuu ka dooran karaa sawirada uu jecel yahay, wuxuuna u soo gudbin karaa doorashadooda farshaxanka.
Isticmaalka caadiga ah ee caddaynta sawirada sawirada arooska. Sawir qaaduhu wuxuu soo gelin karaa dhammaan sawirada uu ka qaaday gallery, wuxuuna u diri karaa xiriiriye gaar ah macmiilka. Ka dib macmiilku wuxuu soo qaataa sawirada uu jecel yahay wuxuuna soo gudbiyaa doorashadooda. Taas ka dib, sawir qaaduhu wuxuu isticmaali karaa xulashooyinkaas si uu u abuuro albamka sawirka ama badeecad la mid ah.
Haddii farsamadani ay faa'iido u leedahay ganacsigaaga, si fudud ayaad u isticmaali kartaa samee gallery caddaynta gudaha NextGEN Gallery. Tan waxa lagu sameeyaa iyadoo inta badan la isticmaalayo hab la mid ah sida abuurista gallery caadiga ah, oo leh qaar ka mid ah fursadaha qaabeynta dheeraad ah. Tusaale ahaan, waxaad samayn kartaa bogga macmiilku arki doono marka ay soo gudbiyaan dookhooda, oo aad naqshadayso iimaylka xaqiijinta ee la diri doono marka la soo gudbiyo. Marka aad hesho soo gudbinta, waxa kale oo aad ka arki kartaa oo aad ku maamuli kartaa aagga maamulka ee NextGEN Gallery.
Si Wacan Ayaa Lagugu Casuumay
Ku biir kooxda Facebook DreamHost si aad ula xidhiidho milkiilayaasha mareegaha ay isku fikirka yihiin oo aad talo uga hesho asxaabta iyo khubarada si isku mid ah!
Ku Biir Bulshada
Ilaa Xaraashka Xaraashka
Sida sawir qaaduhu uu ugu baahan yahay qalabka ugu fiican iyo rinjiyehu u isticmaalo burushka ugu fiican, goobta sawir qaade ee guuleysta waxay u baahan tahay inay isticmaasho qalabka saxda ah. Haddii farshaxankaagu ku filan yahay in la iibiyo, waxaad heshay aasaas adag oo aad ka shaqeyso. Si kastaba ha ahaatee, waxaad weli u baahan tahay inaad hubiso in goobaha sawiradu ay awood u leeyihiin inay si hufan u iibiyaan shaqadaada.
Ma qabtaa wax su'aalo ah oo ku saabsan soo bandhigida iyo lacag galinta goobaha sawirada si wax ku ool ah? Aan wada sheekaysanno Twitter or Facebook!
Amniga WordPress iyada oo loo marayo mugdiga: Maxay ugu filnaan la'dahay in lagu ilaaliyo mareegahaaga ammaan
Dib u eegista ARForms: Xoog badan, Xirfadle iyo Sameeyaha Foomka WordPress